देउवा ओली प्रचण्ड कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ? - Hamrokhotang
Home » National » देउवा ओली प्रचण्ड कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ?
देउवा ओली प्रचण्ड कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ?
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै दलहरूले निर्वाचनका लागि तयारी थालेका छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भनेर आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेकाे छ ।